Sida loo Play WMA on Nexus 7 Tablet
> Resource > Video > Sida loo Play WMA on Nexus 7 Tablet
The Nexus cusub 7 ku guuldareystay inuu Radidiyaha aad WMA music? Haa, waa dhibaato guud. Qaar badan oo Nexus 7 users ka cawday in forums ah oo ah in kiniiniga Google Nexus ku guuldareystay inuu aqoonsado WMA files audio. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari files WMA ku Nexus 7, waxaad isku dayi kartaa ciyaartoyda music Wimamp ama PowerAmp in Store Play. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isku daynay labada ciyaaryahan ee ku xusan iyada oo aan wax guul; waa laga yaabaa in file DRM-ilaaliyo WMA ah. Wakhtigan, aad si fiican u isticmaali lahaa qalab xisbiga saddexaad si loogu badalo WMA in ay MP3 ah oo loo maqli macaan ee Nexus 7.
The Wondershare Video Converter si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, aad u bedeli karaan faylasha WMA in ay MP3 ah si fudud oo dhaqso. Waa awood diinta files WMA aad ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan Converter kasta oo kale oo halkaas iyo sidoo kale tayada sameecadda ah.
Hadda, kaliya bilaabaan in ay bartaan sida loo ciyaaro aad WMA music on Nexus 7. Ha!
1 dar files WMA in WMA si Nexus 7 Converter
Burcad barnaamijka oo aad diyaar u ah inay geliyaan files WMA aad tahay. Si aad u samayn, aad si fudud u jiidi-iyo-hoos u kartaa files WMA deegaanka ka kombiyuutarka gal interface ama riix badhanka on menu ugu weyn.
2 Dooro qaab MP3
Qaab MP3 An waxaa si balaadhan looga aqbalay brand ugu ama model ah qalabka iyo halkan, Nexus 7 waa laga reebo lahayn. Sidaas xaq u badan halkan, waxaan xulan doonaa MP3 format sida wax soo saarka. Si aad u dooran MP3 format sida wax soo saarka aad la doonayo, waxaad ka arki kartaa liiska ay taageerayaan ka hoos-hoos menu qaab wax soo saarka ee, oo taga si Qaabka> Audio category. Si fudud guji qaabka iyo waxa la muujiyaa doonaa sida aad dooratay ee diinta.
3 Beddelaan WMA in Nexus 7
Saxaafadda loogu badalo button on geeska hoose ee midigta ah interface ah si loogu badalo files WMA si aad u MP3. Yeelan doontaa in ay u arkaan horumarka diinta iyo sidoo Waxaad. Waxa kale oo jira ku hako button haddii aad u baahan tahay inaad ku dhejiyey joojiyo ama Cancel waxaa lagu jiro qaab beddelidda.
4 WMA Transfer in Nexus 7
Waxaa jiri doonaa fariin pop-up aad shaashadda mar diinta ayaa ku dhameysatay kaalinta iyo aad u yeelan doontaa in ay guji fariin ay u soo ceshano aad files gediyay. Haddii kale, riix Folder Open si ay u arkaan meesha ay jidka kaydinta dhabta ah ee buugga deegaanka. Hadda waxaad la xiran kartaa Nexus 7 ilaa kombiyuutarka via cable USB iyo mar uu la ogaado, aad nuqul karaa oo si toos ah paste.
Halkan waa video ka tutorial kooban.
Sida loo Play WMA kasta oo ku iPod Si fudud
Sida loo Play WMA kasta oo ku iPhone Si fudud
Top 10 Cinwaan Kan sameeyey Software
Sida loo geliyaan Video inay YouTube Site on Mac (Yosemite ka mid ah)
Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan screen fudud oo taariikhqorihii
Top Toban Shabakadaha kirada 3D Videos Online
Siyaabo cid qubuur in tubada youku on Computer iyo Mobile Phone
Top 5 Free Online wmv in MOV Converter
MOV Splitter: Sida loo Split MOV File (Quicktime)
Video Splitter u Mac: Sida loo Split Video ku Mac
Sida loo Beddelaan M4V in MP3